आज कोरोना कारण १४ जनाको मृत्यु – List Khabar
Home / Uncategorized / आज कोरोना कारण १४ जनाको मृत्यु
आज कोरोना कारण १४ जनाको मृत्यु
admin2weeks ago Uncategorized Leaveacomment 35 Views
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप १२७१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार ८ हजार ८९८ पीसीआर परीक्षणमा १०५८ र ३०४६ एन्टिजेन परीक्षणमा २१३ जना गरी १२७१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । त्यस्तै सोही अबधीमा कोरोना संक्रमणबाट १४ जनाको मृत्यु भएको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा संक्रमणमुक्त हुनेको संख्या १८४५ रहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या २८ हजार ६७८ जना रहेका छन् । जसमध्ये २६ हजार ८८६ जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने १ हजार ७९२ जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन् । यस्तै १० वर्ष मुनिका ३२ बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
काठमाडौँ । गर्भवती महिलाले आफ्नो खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। गर्भवती अवस्थामा सन्तुलित भोजन गर्न चिकित्सकको विशेषज्ञ सल्लाह रहन्छ। जसमध्ये प्रोटिन एक महत्वपूर्ण आहार हो।
प्रोटिन शिशुको विकासका लागि निकै आवश्यक मानिन्छ। खानाको माध्यमबाट शरीरलाई आवश्यक प्रोटिनको पूर्ति नहुँदा अधिकांशले प्रोटिन पाउडरको पनि सेवन गर्ने गर्छन्। गर्भावस्थामा प्रोटिन पाउडर कतिको आवश्यक र सुरक्षित छ ?
गर्भावस्थामा प्रोटिन पाउडरको प्रयोग गर्नु अघि ध्यान दिन आवश्यक छ। सामान्यतया प्रोटिन पाउडर एथलिट गर्ने व्यक्तिले मसल गेन गर्नका लागि सेवन गर्छन्।
शरीरको तौल कम गर्न पनि यसको सेवन गरिन्छ। महिलाको शरीरमा प्रोटिनको कमी पुरा गर्न पनि प्रोटिन पाउडरको जरुरी छरु आमा र शिशु दुवैको सही विकासको लागि पनि प्रोटिन आवश्यक मानिन्छ। तर सबै गर्भवतीका लागि प्रोटिन पाउडरको आवश्यकता नभएको प्रसुति गृहका सिनियर कन्सलट्यान्ट गाइनोकोलोजिष्ट डा कीर्तिपाल सुवेदी बताउँछन्।
उनका अनुसार कुनै पनि महिला गर्भवती हुँदा उसको सामान्यतया १० देखि १२ किलो शरीरको तौल बढ्छ। तर कुनै महिला गर्भवती अवस्थामा पनि तौल बढेन अर्थात् निकै दुब्लो पातलो हुन सक्छ। शरीरमा प्रोटिनको कमी भएको अवस्था र गर्भवती महिला दुब्लो भएमा प्रोटिनको आवश्यक पर्ने उनले बताए।
आफुखुशी भन्दा पनि चिकित्सकको सिफारिस र सल्लाह अनुसार मात्र प्रोटिन पाउडरको सेवन गर्न डा सुवेदीको विशेषज्ञ आग्रह छ। शरीरमा प्रोटिनको कमीले आमा र बच्चा दुवैको विकासमा असर पर्ने उनले बताए।
प्रोटिनको कमीबाट बर्थ डिफेक्ट हुन सक्छ। सही मात्रामा प्रोटिनको पूर्ति नहुँदा बच्चामा कुनै प्रकारको अपाङ्गता पनि हुन सक्छ। शरीरमा प्रोटिनको मात्रा पुरा नभएको अवस्थामा चिकित्सकले प्रोटिन पाउडर सेवन गर्न सल्लाह दिन्छन्। प्रोटिन पाउडरको सेवनबाट हुने विभिन्न फाइदाहरु यहाँ उल्लेख गरिएका छन्ः
आमा र बच्चाको विकास
शरीरमा रिपेयरिंग र विकास गर्नु प्रोटिनको काम हो। बच्चाको मस्तिष्कको ठिकका लागि प्रोटिन महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले प्रोटिन बच्चा र आमा दुवैको स्वास्थ्यका निम्ति फाइदाजनक छ।
गर्भावस्थामा महिलालाई थकाईको महसुस हुनु आम कुरा हो। उनीहरुलाई मूड स्वींग्स पनि भइरहन्छ। गर्भवती महिलाहरु सहज रुपमा काम गर्न सक्दैनन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरुलाई प्रोटिन पाउडर दिने गरिन्छ। यसले उनीहरु स्वफूर्ति महसुस गर्छन्।
शिशुको जन्मपछि महिलाहरुमा स्तनपानको समस्या पनि हुने गर्छ। यो समस्याको समाधानका लागि प्रोटिन पाउडर लाभदायक मानिन्छ।
Previous एकै दिन सुनको भाउमा यति धेरैले गिरावट !! हेर्नुहोस तोलाको कति
Next काँडाघारीको होटलबाट महिलासहित ४ पक्राउ ! ड्यूटीमा खटिएको प्रहरीलाई नै यस्तो गरेछन
आफ्नो इच्छा अनुसार छोरा वा छोरी जन्माउने ६ सुत्र यस्ता छन् ।
आफ्नो इच्छा अनुसार छोरा वा छोरी जन्माउने ६ सुत्र यस्ता छन् । के तपाई पत्याउनुहुन्छ …